Apple zvishandiso zvinogona kuve nekuzvichenesa girazi uye sensors | Ndinobva mac
Apple anotevera michina inogona kuve neyako-yekuchenesa girazi nema sensors
Nezita iri rinoratidzika sechinhu cheNASA. Kuzvichenesa girazi? Ichokwadi ndechekuti tekinoroji iyi yatoita makore mazhinji iyo inoshandiswa muindasitiri uye kuvaka. Kekutanga nguva pandakanzwa nezvechigadzirwa chine yega-yekuchenesa girazi chaive chigadziko chemwenje, anopfuura makore gumi apfuura.
Uye zvakare haisi iyo panacea. Kungoti iyo yegirazi inoshandisa iyo UV rays kubva kuzuva uye kunodzivirira tsvina kubva kunamatira kune girazi. Izvo hazvisi kuti kushanda kwayo kuri 100%, asi chimwe chinhu chinoratidza. Parizvino inoshandiswa zvakanyanya pamadziro ezvivakwa zvegirazi.
Apple ichangobva kunyorera patent dzinoverengeka zvine chekuita nekuchenesa michina yayo. Kuchengeta ma sensors madiki mukati me iPhone kana Apple Watch yakachena uye ichishanda zvakakwana, Apple iri kuongorora mashandisiro ekupisa uye mwenje ku kuora zvinosvibisa izvo zvinogona kuvasvibisa.
Mune akati wandei patent yakapihwa svondo rino, Apple inotsanangura nzira dzekuti mamwe marudzi ema sensors paApple Watch kana iPhone anogona kushandisa yavo yega yekuchenesa system. Unogona shandisa ozone, Yakagadzirwa nemwenje yeultraviolet, kutyaira kure kana kutokanganisa uye kuputsa "asingadiwi makomputa emakemikari" mukati mechishandiso.
Pfungwa ndeye kuputsa tsvina ne UV UV.
Mumwe wavo ane kodzero "Kubvisa kusvibiswa kwehupenyu neozone oxidation yekubatanidzwa kwema sensors ezvemamiriro ekunze". Apple inoda mune ramangwana kushongedza iyo Apple Watch uye iyo iPhone nema sensors akawanda, uye izvi zvinofanirwa kunge zvichitaurirana nekunze, uye zvinogona tsvina nyore, kurega kushanda.
Kuchenesa kwaizoitwa nekuvhenekesa iyo sensor ne ultraviolet mwenje. Yakati spectrum yechiedza inoshandiswa kuputsa ivhu. Iyo chete sisitimu iyo yaizoshandiswa kugadzirisa masikirini asina tsvina kunamatira kwavari, kuora kwavo kunosvibisa zvidimbu.
Ini ndinogara ndichida kupedzisa zvinyorwa zvine chekuita neweni patent zvichitaura zvakafanana. Mazhinji emvumo iyi anoramba ari panzeve dzematsi, uye haumbofi wakakura chaizvo. Asi nekuda kwemutengo wakaderera wekunyorera patent, makambani anoshandisa kunyangwe achiziva kuti izvo zvavanotsanangudza mazviri zvimwe hazvizombogadzike. Asi kungoitika, ivo vanorapwa muhutano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple anotevera michina inogona kuve neyako-yekuchenesa girazi nema sensors
Safari Technology Preview ikozvino yawanikwa mushanduro 111
Maitiro ekufananidza iCloud mafoni, makarenda, kana zviyeuchidzo pane yako Mac